सुखद् सुहागरातको सूत्र ! – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
सुखद् सुहागरातको सूत्र !
विवाह भनेकै दुई यौन जोडीबीचको दाम्पत्य जीवनको सुरुआत हाे । नेपाली परम्पराअनुसार नवविवाहित यौन जोडीले बिताउने विवाहको पहिलो रातलाई ‘सुहागरात’ भनिन्छ । वैवाहिक जीवनमा सुहागरातको ठूलो महत्त्व हुन्छ । दुई भिन्न–भिन्न परिवेश तथा घर–परिवार, गाउँ–ठाउँ, संस्कार–संस्कृतिबाट नवविवाहित जोडीको दाम्पत्य जीवन नै सुहागरातबाटै सुरु हुन्छ ।
विशेषगरी मागी विवाह गर्ने विवाहित यौन जोडीका लागि जोडीको बानी–व्यवहार चिन्ने उत्तम रात समेत हो सुहागरात । पहिलो पटक सँगै रात बिताउँदा पक्कै पनि केही असजिलो, अप्ठ्यारो, डर र सङ्कोच हुन्छ । जो स्वाभाविक पनि हो ।
नवविवाहित यौन जोडीबीच विवाह पछिको पहिलो यौनअनुभूति हुने हुँदा, सुहागरात उत्सुकता र कौतुहलताले भरिएको हुन्छ । विवाहअघि नै यौन जोडीबीच यौन सम्पर्क भएको अवस्थामा समेत सुहागरातको फरक अनुभूति अवस्य नै हुन्छ । नवजोडीका लागि त झन् यो रात कौतुहलतै कौतुहलताले नभरिने कुरै भएन । यस रात यौन जोडीका दुवै पात्रको मन यौनको बहावले भरिएको हुन्छ । सङ्कोच, लज्जापन र डरभावले समेत त्यत्तिकै समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ ।
यौन जोडीबीचको पहिलो प्रभावले पछि हुने यौन तथा दाम्पत्य जीवनमा समेत प्रभाव पार्छ । त्यसैले त भनिन्छ नि– ‘फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन !’ यो वाक्याङ्श यौन जोडीका बीचको यौनकाे मामलामा समेत लागू हुन्छ ।
सुहागरातका दिन नवविवाहित यौन जोडीमा पर्ने मानसिक छापले जोडीबीचको यौनप्रतिको धारणाको सङ्केत मात्रै गर्दैन, जोडीबीचकोे वैवाहिक जीवनको भावी रेखा समेत कोर्छ । यो रात यौन जोडीले जीवनभर खुशी रहन बाचा गर्ने रात समेत हो । यही विन्दुबाट वैवाहिक जीवनको सुरुआत हुन्छ । त्यसैले सुहागरात सुखद् र स्मरणीय हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
सुहागरात यौन व्यवहार (सेक्स) सँग जोडिएको विषय हो । मानव जीवनमा यौन सम्बन्धको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व हुन्छ । अझ सफल वैवाहिक जीवनका लागि विवाहित यौन जोडी (श्रीमान्–श्रीमती) बीच सुमधुर यौन सम्बन्ध हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
प्राकृतिक रूपमा भन्ने हो यौन सम्पर्क सन्तान उत्पादन अर्थात् वङ्श निरन्तरताका लागि हो । तर, यौन व्यवहारबाट बढ्ने आत्मीयता, प्राप्त हुने चरम आनन्द र सन्तुष्टिका कारण यो यतिमा मात्र सीमित रहेन । अझ मनोवैज्ञानिकहरूले त यसलाई भोक–प्यास झैं आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
यो फगत शारीरिक (भौतिक) सम्बन्ध मात्र नभएर मानसिक र आत्मीय सम्बन्ध समेत भएकाले यौन क्रियाकलाप तथा यौन सम्पर्क अत्यन्तै समवेदनशील हुन्छ । र, यो मानव जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने किसिमको समेत हुन्छ । फ्रायड त यौनलाई नै जीवन मान्छन् । उनका अनुसार मानिसको क्रियाकलाप, व्यक्तित्व, कला–संस्कृति, नैतिकताजस्ता कुरा धेरै हदसम्म यौनबाट नै निर्देशित हुने गर्दछन् ।
आत्मीयता बढाउने रात
सुहागरातका दिन नवविवाहित जोडीले देखाउने सफल यौन व्यवहार, उनीहरूबीच हुने शारीरिक सम्पर्क र यसबाट प्राप्त हुने चरम आनन्द तथा सन्तुष्टिले यौन जोडीलाई एक–अर्काबीच नजिक र आत्मीय बनाउने तथा माया–प्रेम अनि घनिष्टता बढाउने कडीको काम गर्छ । सुहागरात भनेको यौन जोडीले आफ्नो भावी योजना बनाउने तथा भावनात्मक रूपमा आफू एक–अर्काको भएको महशुस गर्ने सुनौलो रात समेत हो ।
यौन जोडीले सुहागरातलाई आनन्दमयी तथा उन्मादपूर्ण तरिकाले बिताउनु उचित हुन्छ । यस रातमा यौन जोडीले एक–अर्काबीचको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था बुझेर यौन क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । यस रातमा यौन जोडीले तुरुन्तै यौन क्रियाकलापमा सरिक भैहाल्नु हुँदैन । यौन जोडीका दुवै पक्ष यौन सम्पर्कका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयार भएपछि मात्रै यौन क्रियाकलाप तथा यौन सम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ ।
सुहागरातको गलत यौन व्यवहारले वैवाहिक जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा, नवविवाहित जोडीलाई यौन शिक्षा र यौन कलाको ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ । गलत, अप्राकृतिक र कष्टकर शारीरिक सम्पर्क तथा एक–अर्काको चाहना विपरीत गरिने यौन व्यवहारले नवविवाहित जोडीमा यौनप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुन सक्छ । सुहागरातमै जोडीबीच यौनप्रतिको गलत धारणा बनेको अवस्थामा भविष्यमा यौन जोडीमध्ये एक वा दुवैले एक–अर्कालाई यौनको मामलामा कमजोर ठान्ने या आफ्नो यौन जोडी (श्रीमान् वा श्रीमती) लाई कामुक वा स्वार्थी देख्नेजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।
सुहागरातमा गलत धारण बन्न पुग्यो भने सहबासको इच्छा नै हराएर जाने, यौन सम्पर्क राख्न डर लाग्ने वा यौन चाहना पूरा गर्न वैकल्पिक यौन जोडीप्रति आकर्षित हुनेजस्ता व्यवहारहरू समेत देखिन सक्छन् । यस्ता समस्या उत्पन्न भएमा वैवाहिक यौन जोडीको जीवन नै तहसनहस समेत हुन सक्छ । निरस यौन क्रियाकलाप तथा सम्पर्कले वैवाहिक जीवनमा फाटो आउने जोखिम हुन्छ ।
सुहागरातको समयमा एक–अर्कामा विश्वास, भरोसा र समर्पणको भाव हुनु आवश्यक छ । यौन जोडीबीच एक–अर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, जोडीको ‘कुमार’ वा ‘कुमारीत्व’ को परीक्षण गर्न खोज्नेजस्ता क्रियाकलापले सुहागरातको सुखद् अनुभूति दिन सक्दैन । त्यसैले विगतका तीता–मिठा यौन अनुभूतिलाई बिर्सिदिएर यौन जोडीले सुहागरातलाई नयाँ जीवनको थालनीका रूपमा लिनु उचित हुन्छ; यसले सुखद् दाम्पत्यका लागि सहयोग पुग्छ ।
सुहागरातको सम्भोगले वैवाहिक जीवनमा उत्साह र उमङ्ग थप्ने भए तापनि सुहागरातका दिन अनिवार्यतः सहवास गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन । अत्यधिक थकानको महशुस भएमा, बिरामी परेमा, एक–अर्कालाई अनिच्छा भएमा भने सुहागरातमा यौन सम्बन्ध नराख्नु नै राम्रो हुन्छ ।
यौन अनुशासनको आवश्यकता
सुहागरातलाई सुखद् र स्मरणीय बनाउने कुरामा विवाहपूर्वको यौन जीवनले प्रभाव पार्न सक्छ । यौन चाहनालाई दबाएर राख्नु नहुने धारणा मनोवैज्ञानिहरूले राखे तापनि विलासिता र मोजमस्तीका रूपमा विवाह अगाडि जथाभावी राखिएको यौन सम्पर्कले विभिन्न विकृति र समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । यौन अनुशासन नहुँदा तथा यौनको विषयलाई मान–सम्मान र आदरका साथ नलिँदा देखापर्ने यौन विकृतिले हत्या, आत्महत्या, पारिवारिक कलह, झैझगडाजस्ता मनोसामाजिक समस्याहरू समेत बढाइरहेको हुन्छ । यसले विवाहपछिको वैवाहिक जीवनलाई समेत प्रत्यक्षतः असर पुर्‍याउँछ ।
यौन विकृतिले जीवनमा पार्ने गम्भीर असरलाई ध्यानमा राखेर नै हुन सक्छ, धर्मशास्त्रमा यौनलाई सम्मान र आदरका साथ पवित्र रूपमा हेरिन्छ; विवाह अगाडिको शारीरिक सम्पर्क, परस्त्रीगमन/परपुरुषगमन, बेश्यावृत्तिजस्ता यौन क्रियाकलापलाई ‘पाप’ का रूपमा लिइन्छ । विवाह अगाडिको पटक–पटकको यौन सम्पर्क, बेश्यावृत्ति, परस्त्रीगमन/परपुरुषगमन, बलात्कार, यौनजन्य सङ्क्रमणजस्ता कारणले सुहागरात निरस बन्न सक्छ । यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ । पहिलो पटकको यौन सम्पर्क त्यसपछिका सम्पर्कभन्दा बढी आनन्ददायी र स्मरणीय हुने तथ्यका आधारमा सुहागरातको महत्त्व प्रष्ट हुन्छ ।
विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कले सुहागरातको महŒव त घटाउँछ नै, यस्तो अवस्थामा विवाह अगाडिको आफ्नो यौन व्यवहार नवविवाहित जोडीले थाहा पाउला कि भन्ने डर–त्रासले समेत मानसिक तनाव थप्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यसले हीनता र नैराश्यताको अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ । शारीरिकरूपमा जति सशक्त र अनुभवी भए तापनि मानसिकरूपमा शिथिल र निराश भएको समयमा यौन क्रियाकलाप तथा सम्पर्क सुखद् हुन सक्दैन । यौन सम्पर्कका लागि लागि शारीरिक–मानसिकरूपमा परिपक्व हुनु आवश्यक हुन्छ ।
यसर्थ, भन्न सकिन्छ कि सुहागरात नवविवाहित यौन जोडीका लागि जीवनमा रङ्ग, उमङ्ग र उत्साह भर्ने समय हो । यो वैवाहिक जीवनको समवेदनशील समय भएकाले यस दिन यौन जोडीबीच गरिने व्यवहार सुखद् छाप छाड्ने किसिमको हुनुपर्छ । सुहागरातको सफलता वा असफलता विवाहपूर्वको यौन जीवन, यौन शिक्षा, यौन कलाको ज्ञान, नवविवाहित जोडीमा एक–अर्काप्रतिको विश्वास, भरोसा र समर्पणजस्ता कुरामा भर पर्छ ।
सामान्यतः नेपाली समाजमा नवविवाहित दुलही दुलाहाको घरमा भित्रने भएकाले नयाँ घर, नयाँ परिवेश तथा नयाँ वातावरणले उनलाई सङ्कोच मात्र होइन, असहजता समेत पैदा गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुलाहाले उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सुहागरातको समयमा नवविवाहित यौन जोडी ओछ्यानमा सँगै सुत्नु नै उचित हुन्छ । दुवैले भावना साटासाट गर्नुपर्छ । यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव गरिहाल्नु हुँदैन । आफ्ना भावना एक–आपसमा साट्दै, बिस्तारै यौन क्रियाकलाप गर्नु उचित हुन्छ । यौन जोडीका दुवै पक्ष यौन समपर्कका लागि शारीरिक तथा मानसिकरूपमा तयार भैसकेपछि मात्रै यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव राख्न सकिन्छ ।
यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव राखिसकेपछि यौन जोडीका दुवै पक्षले कुनै सङ्केत, इशारालगायतले यौन सम्पर्कका लागि स्वीकारेपछि मात्रै यौन सम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ । यौन स्वीकारोक्ति बोलेरै मात्र हुन्छ भन्ने छैन, कुनै सङ्केत तथा इशाराका माध्यमबाट पनि हुन सक्छ । यसरी सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्नाले एक त सुहागरातको सुखानुभूति हुने भयो, अर्कोतर्फ सुखद् सुहागरातले यौन जोडीबीचको भविष्यको यौन जीवन तथा दाम्पत्य जीवन समेत सुखद हुन सहयोग पुग्छ । यसका निम्ति यौन जोडीका दुवै पक्षले सचेतता अपनाउनुका साथै यौन शिक्षा समेत लिनु आवश्यक हुन्छ ।
(ढकाल मनोविद् हुन्, उनी ‘मार्क नेपाल’ संस्थासँग आबद्ध छन्)